Ziziphi i-adenoids kunye nendlela yokuphatha ngayo?
I-Pharyngeal (i-nasopharyngeal) i-amygdala - ukuqokelela kweethambo ezi-lymphoid. Iimonyile zijikeleza ngokungena kumnyango we-pharynx. I-tonsil ye-pharyinal isendaweni ye-nasopharynx, ngokuchanekileyo kwinqanaba elincinane lesiseko sekhanga, mhlawumbi ephakamileyo kuneendawo apho umqubu womnquba udlulela kwi-pharynx. Amathoni e-Pharyngeal, kwakunye neetaluline zamathambo zikhusela umzimba kwiintsholongwane. Ngenxa yezizathu ezahlukileyo, i-pharyngeal tonsil inokunyuka kakhulu. Ukwanda kweepathologi ze-pharyngeal tonsil yi-adenoids, ebizwa ngokuba ngama-polyps.
1. Ukuphefumula kwamanzi kunzima okanye kuphazamiseke ngokupheleleyo, umlomo uhlala uvula;
2. I-Khrap, iphupha elibi;
3. Ukuvutha okungapheliyo kwe-bronchi, indlebe ephakathi, kunye ne-sinanas;
4. Ukulahleka kwindlebe elula okanye ephakathi.
I-pharyngeal tonsil ikhula rhoqo ngenxa yokwanda kwamathambo e-lymphoid ngaphakathi kwayo, apho kukho uhlobo olulodwa lwe-leukocytes kunye ne-lymphocytes ezikhusela umzimba kwiintsholongwane. Ngoko ke, kucacile ukuba kunye nezifo ezihlala zihlala zihlala zikhula, kunye nokwanda kwangexesha, i-pharyngeal tonsil iyanda. Le ndlela ifana nxamnye ne-rhinitis ye-allergen, ngenxa yempendulo yokuhlala i-lymphoid tissue, i-pharyngeal tonsil iyanda.
Ukuba imbangela yokuvuvukala kwakhona kwindlebe ephakathi kunye neesanasus, i-bronchitis okanye i-snoring enamandla i-adenoids, kufuneka isuswe. I-Adenoids isuswe ukuba ugqirha ugqiba ukuba baye bavala i-khans (imingxuma yangasemva yesigxina esasisigxina esisikhokelela kwi-pharynx) kunye nemingxuma ye-tubes audition eya kwi-pharynx, kwaye ngaloo ndlela iphazamise ukuphefumula okuqhelekileyo kunye nomsebenzi wee-tubes auditor. Lo msebenzi ongeyingozi ungenziwa phantsi kwe-anesthesia jikelele kunye neyayiphi na iminyaka.
Uzinceda njani? Ukuba ufuna ukukhusela umntwana wakho kwiintsholongwane ezingapheliyo, kucetyiswa ukuba uyithukuthelise.
Ndifanele ndibone nini na ugqirha? Ukuba ubuncinane enye yeempawu, kufuneka ubone ugqirha, kuba ngamanye amaxesha iimpawu ezifanayo zibalisa izicubu ezimbi.
Ugqirha uya kuhlola i-nasopharynx yesigulane kwaye uqinisekise ukuba kukho i-hyperplasia yamathoni e-pharyngeal. Emva kokusekwa ukuxilongwa, ugqirha uya kukucebisa ukuba wenze umsebenzi.
Inkambo yesi sifo.
I-Adenoides ayingozi. Imiphumo emibi ingabangela nje iingxaki zabo. Inkxalabo enzima kakhulu xa i-adenoids ephakamileyo ngokupheleleyo okanye iyingxenye yecandelo lokuhlola elivulwayo kwi-pharynx, ukuvimba ukuphuma kwe-secretion kwindlebe ephakathi ukuya kwi-pharynx. Ukongeza, ukuba umsebenzi wepayili yokuphicotha iphulwe kwindlebe ephakathi, uxinzelelo olubi luyakhiwa, ngoxa ngexesha elifanayo indawo efanelekileyo yokuveliswa kweebhaktheriya yenziwa, okubangelwa ukuvuvukala okuphindaphindiweyo kwindlebe ephakathi. Ngokumalunga neengxaki ezinjalo, i-adenoids kufuneka isuswe.
Ngaba i-adenoids iyingozi?
I-hyperplasia yee-tonsils ze-pharyngeal ayiyingozi, kodwa inokumisela kwangaphambili ukutshabalala okungapheliyo kwesono se-paranasal (sinusitis). Ngenxa yokwanda kweetoni, ukuvuvukala kubantwana kuqhutyiswa rhoqo. Ngenxa yenguqu ekuphefumla, inxalenye ebusweni bengegazi ngezinye iinguqu. Ukongezelela, ukuphuhliswa kwalabo bantwana bahlehla ngasemva, bafunda kakubi.
Ukwandiswa kwe-Adenoidal idibanisa indlela yokuphefumula kwaye inokuphazamisa ngokutsha ukutshintshwa kwe-oksijini emzimbeni womntwana, okuza kubangela ukuphazamiseka kokulala, ukunciphisa amandla okusebenza emini, kuthintela ukukhula kwenyama, kwaye kunokulungiselela ukusilela kwintliziyo. Emva kokusebenza, ngokwenene, yonke into iyatshintsha - kukho ukuxhoma ekukhuleni komntwana, ubambelela oontanga bakhe.
Esinye sezimbangela zokuvuvukala kwendlebe ephakathi kungaba yi-adenoids. Ukuxilongwa ngokuchanekileyo, ukubonisana nodokotela kuyimfuneko.
Indlela yokubuyisela umzimba emva kokubanda kwexesha elide
Izindlela zokususa i-moles
Zihlambulukile amajikijolo amnandi
Siqala ubomi obutsha!
Ukuguqulwa kwonyawo kunye nesimo esingalunganga
Aloe, iimpawu zonyango, isicelo
Ikhukhi zeKhokolethi enkulu
Umklami uKira Plastinina
Ngaba kukho ukuphuka kobudlelwane kwinyanga?
Kutheni ufuna ukusela amanzi amaninzi xa usondla?
Indlela yokugubungela imfama
Kutheni abesifazana bazenza njengengqungquthela?
Iipropati zokuphilisa ioli ye patchouli
Ngayiphi i-puree yemifuno yokuqalisa ukuthambisa umntwana?
Abasebenzisi be-intanethi baxoxe ngomtshato osenyukayo kaDmitry Tarasov kunye no-Anastasia Kostenko, ifoto
Imithandazo kunye nesibheno kumlondolozi wakho ngezempilo, uthando kunye nenzuzo
Ukupheka kweqhwa ebusweni ekhaya
Isilungiso esiphezulu sevumba lomthunzi
Umonakalo wamaprotheni emzimbeni: inkolelo okanye inyaniso?
Ama-Austrian crimson shortbreads
I-Blueberry pie ene-lemon peel
URihanna kunye noMaroon 5 babhaliselwe umntu odibeneyo